1 Ahene 11:1-43
11 Na Ɔhene Solomon dɔɔ mmea ananafo+ pii kaa Farao babea+ no ho: Moabfo,+ Ammonfo,+ Edomfo,+ Sidonfo+ ne Hitifo+ mmea, 2 aman a Yehowa kaa wɔn ho asɛm kyerɛɛ Israel no, sɛ: “Monnkɔ wɔn mu,+ na mommma wɔn nso mmma mo mu; dan na wɔbɛdan mo koma akodi wɔn anyame akyi.”+ Wɔn na Solomon de ne ho kɔfam+ wɔn ho dɔɔ wɔn. 3 Onyaa yerenom ahanson a wɔyɛ adehye, ne ayefam ahasa. Ne yerenom no de nkakrankakra+ dan ne koma. 4 Na Solomon nkwakoraabere+ mu no, ne yerenom dan+ ne koma kodii anyame foforo akyi;+ ne koma anni mũ+ wɔ Yehowa, ne Nyankopɔn ho sɛ ne papa Dawid koma. 5 Solomon kodii Sidonfo nyamewa Astoret+ ne Milkom,+ Ammonfo atantanne no, akyi. 6 Na Solomon fii ase yɛɛ Yehowa ani so bɔne,+ na wanni Yehowa akyi ankosi ase sɛ ne papa Dawid.+ 7 Saa bere no na Solomon sii sorɔnsorɔmmea+ maa Kemos,+ Moabfo atantanne+ no, wɔ bepɔw+ a ɛwɔ Yerusalem anim+ no so, na osii bi nso maa Molek, Ammonfo atantanne no. 8 Saa na ɔyɛ maa ne yerenom ananafo+ a wɔhyew afɔrebɔde na wɔbobɔɔ afɔre maa wɔn anyame+ no nyinaa. 9 Ɛnna Yehowa bo fuw+ Solomon efisɛ ne koma dan fii Yehowa, Israel Nyankopɔn a oyii ne ho adi kyerɛɛ no mprenu+ no ho.+ 10 Ná wabɔ no kɔkɔ wɔ eyi ho sɛ onnkodi anyame foforo akyi,+ nanso wanni nea Yehowa hyɛɛ no no so. 11 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Solomon sɛ: “Sɛ́ woayɛ eyi na woanni m’apam ne m’ahyɛde a mehyɛɛ wo so nti, ohwim na mehwim ahenni no afi wo nsam, na w’akoa na mede bɛma no.+ 12 Nanso wo papa Dawid nti,+ merenyɛ eyi wɔ wo bere so.+ Wo ba nsam na mehwim afi.+ 13 Mmom ɛnyɛ ahenni no nyinaa na mehwim.+ M’akoa Dawid+ ne Yerusalem a mapaw+ nti, mede abusuakuw biako bɛma wo ba.” 14 Ɛnna Yehowa maa ɔsɔretiafo+ bi a wɔfrɛ no Hadad sɔre tiaa Solomon.+ Ɔyɛ Edomni a ofi ɔhene asefo mu. Ná ɔte Edom.+ 15 Bere bi a Dawid kunkum Edomfo,+ na ɔsahene Yoab kɔe sɛ ɔrekosie wɔn a wɔawuwu no, ofii ase kunkum Edom mmarima nyinaa.+ 16 (Asram asia na Yoab ne Israel nyinaa dii wɔ hɔ kosii sɛ okunkum Edom mmarima nyinaa.) 17 Na Hadad ne Edom mmarima bi a wɔyɛ ne papa nkoa a wɔka ne ho guan kɔɔ Egypt; saa bere no, na Hadad yɛ abarimaa. 18 Enti ɔne wɔn fi Midian+ kɔɔ Paran, na wɔkɔfaa mmarima fi Paran+ ne wɔn kɔɔ Egypt hene Farao nkyɛn wɔ Egypt, na ɔno nso maa no fie. Bio nso, ɔmaa no aduan ne asase. 19 Na Hadad kɔɔ so nyaa Farao anim dom+ ma enti ɔmaa no ɔyere;+ ɔde n’ankasa ne yere ɔhemmaa Tapenes nuabea maa no waree. 20 Akyiri yi Tapenes nuabea no woo ɔbabarima a wɔfrɛ no Genubat maa no; Farao fie na Tapenes twaa abofra no nufu,+ na Genubat ne Farao mma tenaa Farao fie hɔ. 21 Na Hadad tee wɔ Egypt sɛ Dawid ne n’agyanom akɔda,+ na ɔsahene Yoab nso awu.+ Enti Hadad ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Gya me kwan ma menkɔ+ me kurom.” 22 Na Farao bisaa no sɛ: “Wote me nkyɛn yi, dɛn na ehia wo a enti wopɛ sɛ wokɔ wo kurom?” Ɛnna obuae sɛ: “Hwee nhia me, gya ara na gya me kwan ma menkɔ.” 23 Onyankopɔn san maa ɔsɔretiafo+ foforo, Eliada ba Reson sɔre tiaa no; ɔno na oguan fii ne wura Soba+ hene Hadadeser+ nkyɛn no. 24 Ɔboaboaa mmarima bi ano baa ne nkyɛn, na ɔbɛyɛɛ afowfo no so sahene bere a Dawid kunkum+ Sobafo no. Enti wɔkɔɔ Damasko+ kɔtenaa hɔ, na wodii ade wɔ Damasko. 25 Ɔno nso sɔre tiaa Israel, Solomon nna nyinaa+ sɛnea Hadad haw wɔn no; bere a odii ade wɔ Siria no nyinaa, okyii Israel kɔkɔkɔkɔ.+ 26 Efraimni Nebat a ofi Sereda no ba Yeroboam,+ Solomon akoa+ a ne maame ne okunafo Serua nso sɔree, na ɔtew ɔhene anim atua.+ 27 Nea enti a ɔtew ɔhene anim atua ni: Solomon kyekyee Milo,*+ na otuatuaa ne papa Dawid Kurow+ afasu no. 28 Ná Yeroboam yɛ ɔbarima kokodurufo a ne ho yɛ den.+ Solomon hui sɛ aberante no yɛ obi a ɔpɛ adwuma,+ enti ɔyɛɛ no Yosef fie+ apaafo+ nyinaa sohwɛfo.+ 29 Saa bere no, Yeroboam fii adi fii Yerusalem, na Siloni+ odiyifo Ahiya+ hyiaa no kwan so; ná Ahiya de ntama foforo akata ne ho na na obiara nka wɔn baanu ho wɔ wuram hɔ. 30 Ɛnna Ahiya soo ntama foforo a ɛkata ne ho no mu, na osunsuanee+ mu asinasin dumien.+ 31 Na ɔka kyerɛɛ Yeroboam sɛ: “Yi du fa, na nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Mehwim ahenni no afi Solomon nsam, na mede mmusuakuw du bɛma wo.+ 32 Na m’akoa Dawid+ ne Yerusalem,+ kurow a mapaw afi Israel mmusuakuw nyinaa mu nti, megyaw abusuakuw biako+ ama no. 33 Nea enti a mereyɛ saa ne sɛ, wɔagyaw me+ akɔkotow Sidonfo nyamewa Astoret+ ne Moabfo nyame Kemos+ ne Ammonfo nyame Milkom;+ wɔannantew m’akwan so anyɛ nea ɛteɛ m’ani so, na wɔanni m’ahyɛde ne m’atemmusɛm so sɛ ne papa Dawid. 34 Nanso merennye ahenni no nyinaa mfi ne nsam, efisɛ mɛyɛ no otitiriw, ne nkwa nna nyinaa, m’akoa Dawid a mapaw+ no nti, efisɛ ɔno de, odii me mmara nsɛm ne m’ahyɛde so. 35 Ogye na megye ahenni no afi ne ba nsam na mede ama wo; mmusuakuw du na mede bɛma wo.+ 36 Na sɛnea ɛbɛyɛ a m’akoa Dawid benya kanea daa m’anim wɔ Yerusalem,+ kurow a mapaw de me din ato so+ no mu nti, mede abusuakuw biako bɛma ne ba. 37 Wo na mɛfa wo, na wubedi nea wo kra pɛ+ biara so, na wubedi Israel so hene. 38 Sɛ wudi nea mɛhyɛ wo nyinaa so, na wonantew m’akwan so yɛ nea ɛteɛ m’ani so, na wudi m’ahyɛde ne me mmara nsɛm nyinaa so sɛnea m’akoa Dawid yɛe+ no a, ɛnde me nso medi w’akyi,+ na mɛkyekye daa fie ama wo sɛnea makyekye bi ama Dawid+ no, na mede Israel bɛma wo. 39 Eyi nti mɛbrɛ Dawid asefo ase,+ nanso ɛrenyɛ nna nyinaa.’”+ 40 Enti Solomon pɛe sɛ okum Yeroboam.+ Ɛnna Yeroboam sɔre guan+ kɔɔ Egypt hene Sisak+ nkyɛn, na ɔtenaa Egypt kosii sɛ Solomon wui. 41 Solomon ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe ne ne nyansa nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Solomon ho nsɛm nhoma no mu. 42 Nna a Solomon de dii Israel nyinaa so hene wɔ Yerusalem no si mfe aduanan.+ 43 Na Solomon ne n’agyanom kɔdae,+ na wosiee no ne papa Dawid Kurow+ mu, na ne ba Rehoboam+ bedii n’ade.